चितवनको रमाइलो : कांग्रेसले माओवादीलाई भोट दिने, माओवादीले एमालेलाई – MySansar
चितवनको रमाइलो : कांग्रेसले माओवादीलाई भोट दिने, माओवादीले एमालेलाई
चितवनको भरतपुरमा चुनाव हुँदै गर्दा निकै अनौठो घटना देखियो। भरतपुर महानगरपालिकामा खासमा कांग्रेस जित्ने देखिन्थ्यो। कांग्रेसले मेयरमा दिनेश कोइरालालाई टिकट दिएको थियो। तर हेलिकप्टर चढेर उनी मनोनयन दर्ता गरी प्रचारमा जुट्दानजुट्दै केन्द्रमा माओवादीसँग भएको सहमतिपछि उनको टिकट खोसियो, उनले नाम फिर्ता लिनुपर्‍यो। प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाललाई कांग्रेसले भोट माग्नुपर्‍यो। उता एमालेबाट देवी ज्ञवाली मैदानमा थिए। चुनावमा देवी जित्दै थिए तर मतपत्र च्यातेर पुनः मतदान गराइयो। पुनः मतदानमा कांग्रेसीहरुले खुबै इमान्दार भएर हसियाहथौडामा छाप लगाएर रेणुलाई जिताइदिए। यहाँसम्मको कथा एक पाटो थियो। रमाइलो त त्यसपछि झन् सुरु भयो।
हिजो त्यहाँ चितवनको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन भयो। यसमा जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले मतदान गर्न पाउँछन्। चितवनमा सात वटा स्थानीय तह थिए। त्यसमध्ये भरतपुर महानगरपालिका र माडी नगरपालिकामा माओवादी विजयी भएको थियो।
कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर कांग्रेसको भोटले मेयर जिते पनि रेणु दाहालले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा भने नयाँ बनेको वाम गठबन्धनका कारण एमाले उम्मेदवारलाई भोट दिइन्। माओवादीको भोटसहित जिससको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका भरत अधिकारीलाई पराजित गर्दै जिल्ला समन्वय समिति चितवनको प्रमुखमा नेकपा एमालेका कृष्ण कुमार डल्लाकोटी निर्वाचित भए। त्यस्तै उप-प्रमुखमा पनि नेकपा एमाले कै मुना कुमारी श्रेष्ठ विजयी भइन्।
डल्लाकोटीले ११ मत ल्याएका थिए भने उनका प्रतिस्पर्धी अधिकारीले ३ मत ल्याएका थिए।
एमालेको नौ भोट थियो। कांग्रेसको तीन र माओवादीको दुई। माओवादीले भोट नहालेको भए पनि जित्ने एमाले नै थियो। कांग्रेस र माओवादी मिलेका भए पनि एमालेलाई जित्न सक्ने चाहिँ थिएन। कांग्रेसकै भोट पाएर जितेको हुनाले नैतिकताको आधारमा रेणु दाहालले भोट कतै नहालेको भए पनि जित्ने एमालेले नै थियो। तर राजनीतिमा यस्तो नैतिकताको कुरा कहाँ हुन्छ र। नयाँ वाम गठबन्धन बनेको छ, त्यसमा त इमान्दार हुनुपर्‍यो नि हैन?
बिचरा यो सब टाउकेहरुको खेलमा एमालेका देवी ज्ञवाली र कांग्रेसका दिनेश कोइरालालाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको होला है !
बिचरा देवी ज्ञवालीका छोरा रेणुलाई फेसबुकमा गाली गरेको अभियोगमा परेको मुद्दाको पेशी धाइरहेका होलान्। यता दुई पार्टी मिल्ने कुरा भइसक्यो।
3 thoughts on “चितवनको रमाइलो : कांग्रेसले माओवादीलाई भोट दिने, माओवादीले एमालेलाई”
सक्ने जति बल लगाऔँ काँङ्गेसहरु एमाले हराउन माओवादिलाई भोट हालुम एमालेहरु काँङ्गेस हराउन माओवादिलाई भोटहालुम ,माओवादीहरु माओवादिलाई जिताउन भोटहालुम अनि यो देशमा राजनितिक सन्तुलन कायाम गरौं । सर्प,विच्छी र भ्यगुतोको सन्तुलन कथा सानो छँदा गुरुहरुले सुनाउनुहन्थयो अहिले नेपालको राजनितिमा देखिराछ ।
कांग्रेसीहरुले खुबै इमान्दार भएर हसियाहथौडामा छाप लगाएर रेणुलाई जिताइदिए।
Devkala Dewan says:
नेपाली राजनैतीक कमेडिले
हसाउनु हसायो !